सभि भारतीय जनता जो समान आदर और भाईचाराके आधारमे नेपालसे सम्बन्ध रखते है, उनको आदर तथा प्रणाम् सहित ।
महामहिम प्रधानमन्त्री महोदय,
नरेन्द्र मोदीजी, ऐसे कैसे होगा भाइजी, आप/आपके नक्सेबाले खिस्यागएल हो का ? ईस मानसिकता और अप्ने नक्से दोनोको सुधारलो भाइ, नहि तो दोनो हि स्वतन्त्र, विशाल और समृद्ध भारतके लिए प्रत्युत्पादक हो जाएंगे, ये तो निश्चित हि है । भागवत गीता और कर्मके बारेमे तो आप जानते हि हो । आपसे निवेदन यह है कि आप जब नेपाल आए थे, नेपालके संसद्मे पहिले नेपालीमे और बादमे हिन्दीमे भाषण किया था । वैसेही मै पहले हिन्दीमे वादमे नेपालीमे आपको सम्बोधन करना चाहता हुँ ।
नेपालके टट्टी और पानी बिना आप लोगो कि दिनचर्या नही चल्ती है । और नेपालके गोर्खा फौज आपके यहाँ नही होता तो भारतके कई टुकडे हो जाते । तबभी आपको कोइ यहसास नही है, नेपालके प्रति ! इतनाही नही आप अपने पडोसी देशोको ऐसे दबाते है, आपके दादागिरी चरम सीमा नाघ चुका है ।
प्रधानमन्त्री ज्यू, सन् १८१६ मा ब्रिटिस ईष्ट ईण्डिया कम्पनीसँग सुगौली सन्धि हुँदा विशाल नेपालको पूर्वको टिस्टा नदीदेखि ७० किमीसम्म मेघना नदीसम्म, पश्चिम काँगडा सिन्धु नदीदेखि पारिसम्म, (जो अहिले पाकिस्तानमा पर्छ) उत्तरमा हिमालय, दक्षिणमा गंगा नदीको सिमाना र गोमती नदी तथा आधा पटनासम्म विशाल नेपाल फैलिएको तपाईलाई थाहै छ । दक्षिणको गंगाा नदीदेखि उत्तरको मैदानी भू–भाग हरिद्वार, बरेली सबैै नेपाली भू–भाग थियो । तर, अग्रेजी सेनासँग नेपाली सेनाको हार भएको थिएन । त्यो सन्धिमा महाकाली नदीदेखि पश्चिम र मेची नदीदेखि पूर्वको सम्पूर्ण भू–भाग ईष्ट ईण्डिया कम्पनीले झुक्क्याएर लिएको इतिहास तपाईलाई अवगत नै छ ।
जब लखनऊमा सैनिक विद्रोह भयो, त्यो विद्रोहलाई भारतीय वा अंग्रेजको माग्दा वीर शम्शेरको कमाण्डमा सैनिकहरु गएर लखनऊको सैनिक विद्रोह देखाउन सफल भए । यदि, त्यहाँ गोर्खाली सैनिक उपस्थित भएको थिएन भने अंग्रेजी शासन विफल भएर भारत टुक्रिएर जाने जानकारहरु बताउँछन् । त्यस्तै सुगौली सन्धि भएको ८ महिनापछि नेपालको पूर्वी तराई, मेची नदी, पश्चिम बारा, पर्सासम्मको भू–भाग ईष्ट ईण्डिया कम्पनीबाट नेपालले फिर्ता पाएको देखिन्छ । यसरी ब्रिटिशले लिएको भू-भाग क्रमशः फिर्ता गर्दै जाने हुँदा त्यसै अन्तर्गत पूर्वी तराई फिर्ता भएको देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्री ज्यू, तपाईलाई थाहा छ, अंग्रेजले भारतरुपी राज्य खडा गर्दा ५६५ पूर्व राज्यहरुको एकीकरण गरेको थियो । भारतीय राजा रजौटाहरु अझै कुमाउमा छन् तर प्रशाासकीय अधिकारमा छैनन् । तिनीहरुमा तपाईको भारतमा बोलिने हिन्दी भाषा राष्ट्र भाषा मानिन्छ तर, सबै राज्यमा अनिवार्य छैन । प्रत्येक राज्यमा आफ्नो आफ्नो भाषा छ । त्यसैले म तपाईलाई सल्लाह दिन चाहन्छु कि तपाईले नेपालमाथि बक्रदृष्टि राख्ने कार्य बन्द गर्नुहोस् ।
अझै तपाईलाई भन्छु ब्रिटिस ईष्ट ईण्डिया कम्पनीले भारतबाट बिदा लिएर गइसकेपछि नेपाल र भारतको पहिलो सन्धि सन १९५० मा सम्पन्न भएको थियो । त्यो सन्धिको धारा-८ मा लेखिएको छ- ब्रिटिश भारतसँग योभन्दा अगाडिका सम्पूर्ण सन्धीहरु खारेज हुनेछन् । त्यसको तात्पर्य सुगौली सन्धि पनि खारेज भएको मानिन्छ । सुगौली सन्धिले गुमाएको पूर्वको टिष्टादेखि मेघाना नदी, पश्चिमको काँगडादेखि पर पाकिस्तानी भू–भागसम्म, दक्षिणमा बरेली आधा लखनऊ आधा पटनासम्म, गंगा नदीको उत्तरी किनारसम्मको भू–भाग नेपालले पाउनु पर्छ ।
यदि दिन मिल्दैन भने तत्कालीन नेपालको प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणालाई सुगौली सन्धि भएको ४४ वर्षपछि बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर फिर्ता दिइएको छ । नेपाल र ब्रिटिश भारतसँग भएको १८१६ को सन्धिले गुमाएको भू–भाग सन १९५० को सन्धिको धारा-८ ले फिर्ता दिएको छ । त्यो नक्सा ब्रिटिश लाईब्रेरी ईङल्याण्डमा सुरक्षित होला । त्योअनुसार तपाईले नेपालको सम्पूर्ण भू–भाग छोड्नुपर्दछ । यदि, तपाई छोड्न मान्नु हुन्न भने त्यस्को बिरोधमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालत, संयुक्त राष्ट्र संघमा समेत जानुपर्ने हुन्छ ।
त्यति हुँदाहुँदै पनि सुगौली सन्धिले छोडेको जमीनमा पनि अझै आँखा गाड्दै अतिक्रमण गर्दै हुनुहुन्छ । पश्चिमी सीमा भनेको दार्चुला जिल्ला अन्तर्गत पर्ने कालापानी, लिम्पियाधुराको ४० हजार भन्दापनि बढी क्षेत्रफल जबरजस्ती आफ्नो नक्सामा पार्नु भएको हुँदा आफ्नो नक्साबाट सो भू–भाग हटाउनु होस् । तपाईको नियत र कर्तुतहरु सञ्जालमार्फत् विश्वभरि फैलिएका छन् । तपाईले नेपालको तराईका जिल्लाहरुको दशौं हजारौं वर्ग किमी हडप्नु भएको छ । त्यो तपाईले कसरी हुन्छ तुरुन्तै छोड्नुपर्छ ।
प्रधानमन्त्री ज्यू, नेपाल जस्तै के भारत स्वतन्त्र थियो ? सुरुदेखि आजसम्म नेपाल कसैको गुलाम भएन तर तपाईको देशमात्रै होईन तपाईका पीता पुर्खाहरुले पनि गुलामी जीवन बिताउनु भएको छ । त्यै धङधङी तपाईमा कायम देखिन्छ । तपाईलाई थाहा होला भारत कहिलेदेखि स्वतन्त्र भएको थियो । इष्ट इन्डिया कम्पनीले भारतका ५६५ वटा साना ठूला राज्यहरुलाई एकीकरण गरेपश्चात् इन्डिया भनेर नामाकरण गरेको इतिहास ताजै छ । डिक्सनरी पल्टाउनुहोस् । इन्डिया भनेको के रहेछ बुझ्नुहुन्छ । हिन्द महासागरदेखि माथि बंगालको खाडी, अरब सागर कक्षको खाडी लगायत चोरेको भू–भागलाई अझै भारतीय महाद्वीप भनिन्छ ।
यसरी व्यापारी बनेर आएका अंग्रेजहरुले आफ्नो विशाल साम्राज्य फैल्याउने मौका पाए । जसको साम्राज्यमा कहिल्यै सूर्यास्त हुँदैनथ्यो । त्यति बेलादेखि अंग्रेजले आँखा गाडेको ठाउँ नेपाललाई आफ्नो छातामा ल्याउन असमर्थ भयो । त्यसैको नक्कल कहिले पूर्वबाट, कहिले पश्चिमबाट, कहिले दक्षिणबाट नेपालको सीमा अतिक्रमण गरी साँघुरो बनाउँदै हुनुहुन्छ । ब्रिटिश आधिपत्यबाट तपाईको देश स्वतन्त्र हुनुभन्दा अगाडि बर्मा, पूर्वी पाकिस्तान र पश्चिमी पाकिस्तान छुट्टिएका थिए । तपाईको देश पछिल्लो दिनमा स्वतन्त्र भएको थियो । सन् १९४७ देखि अस्तित्वमा आएको भारतमा अझै पनि वीर गोर्खालीहरुको बटालियनहरु राखिएका छन् ।
यदि, तपाई जस्तो डरपोक मनस्थिति भएको भए इष्ट इन्डिया कम्पनीले नेपाललाई विभाजन गरिसक्थ्यो । वीर नेपालीहरु सुरवीर भएर विश्वमा नाम कमाएको जाति हो । यस्तो आस्था, बल र साहस देखेर विश्वका शासकहरु पनि डगमगाएका थिए । त्यसैले ब्रिटिसले आफ्नो आधिपत्यको भू–भाग तपाईहरुलाई छोडेपनि गोर्खालीलाई छोड्न सकेन । गोर्खालीहरुको फौज १० बटालियन मध्ये ६ बटालियन आफूसंगै लिएर गयो भने ४ बटालियन मात्र तपाईलाई छोडेको थियो । जुन तिनै वीर गोर्खालीहरुको मातृभूमि जन्मभूमिलाई पटकपटक अतिक्रमण गर्दै हुनुहुन्छ तपाईं । तपाईं अति गर्दै हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्री ज्यु । अतिले खती निम्त्याउँछ । कुनै पनि त्यस्तो केहि परिहाल्यो भने ती वीर गोर्खालीहरुले तपाईको साथ दिनेकी आफ्नो मातृभूमिको रक्षा गर्ने तपाईलाई स्पस्ट हुँदाहँदै पनि तपाई किन निहुँ खोज्दै हुनुहुन्छ?
प्रधानमन्त्री ज्यू नेपालको कालापानीबाट तुरुन्त आफ्नो सैनिक फिर्ता गर्नुस् । कालापानीदेखि पश्चिम गुँजी, कुटीयादी लिम्पीयाधुरासम्मको भू–भाग नेपालको हो । तपाईले त्यो क्षेत्रका नेपाली नागरिकहरुलाई घुस खुवाएर उच्च तहमा राख्नु भएको छ । किनकी नेपाल सरकारलाई यो भूमि भारतको हो भनेर मन्त्र लगाउँदै हुनुहुन्छ । २००८, २०११, २०१८ को जनगणना भएको छ । तर तपाईले त्यो क्षेत्रमा रहेको आफ्नो सैनिक ब्यारेकहरु तुरुन्त फिर्ता गर्नुपर्छ । त्यो लिम्पीयाधुरा जुन महाकाली नदीको उदगम स्थल हो, कालीवारीको सम्पूर्ण भू–भाग नेपालको भूमि हो ।
म तपाईलाई अझ भन्न चाहन्छु- तपाईको पाकिस्तानसँग जोडिएको कासील क्षेत्रमा पाकिस्तानी सैनिकको उपस्थिति हुँदा तपाईलाई जलन हुन्छ । त्यस्तै नेपालको कालापानी लगायतका क्षेत्रमा तपाईको सैनिक उपस्थिति हुँदा के नेपाल र नेपालीलाई पीडा हुँदैन । त्यतिखेरै ति सैनिक बंकरहरु क्षतविक्षत गर्ने मन हुन्छ ।
मोदीजी तपाई पटकपटक नेपालको सीमा अतिक्रमण गरी वीर गोर्खालीको सैनिकहरुलाई भाडाको टट्टु सम्झेर पाकिस्तान, चाईनासंगको लडाईमा मोहडामा राख्नुहुन्छ जो तपाईको देशको लागि शहीद हुन्छन् । अन्तमा उनको लास पनि सतगत गर्न उनको परिवारलाई दिनुहुन्न ।
मोदीजी सुगौली सन्धि हुनुभन्दा अगाडिको विशाल नेपालको कूल क्षेत्रफल ३ लाख ४७ हजार वर्ग किलोमिटर थियो भने सुगौली सन्धिपश्चात् १ लाख ४७ हजार ५ सय १६ वर्ग किलोमिटर कायम गरेपश्चात् पनि अहिले आएर १ लाख ४७ हजार वर्ग किलोमिटर मात्र देखिन्छ । हाम्रा इतिहासका नेताहरु नबोली नेपालको क्षेत्रफल १ लाख ४७ हजार १ सय ८१ हो भन्दै आए भन्दैमा अब हामी मान्देनौं । अब हाम्रो सरकारले पनि देशको क्षेत्रफल र नक्सा सच्चाइ सकेको छ । अब हामी एक जुट छौँ र आफ्नो आफ्नो स्वाभिमानका लागी जस्तोसुकै जोखिम मोल्न तयार छौं ।
वीर गोर्खाली हुन् । उनीहरुको तागत साहस कस्तो छ तपाईलाई याद भएकै कुरा हो । आधुनिक सैन्य सामग्रीका अग्रेजहरु समेत लड्न नसकेर लुते कुकुर भागेझैं भागेका इतिहास तपाईंलाई थाहा नै होला । ठाउँ–ठाउँमा परास्त भएका छन् । त्यो ईतिहास कायम गरेका छन् वीर गोर्खालीले ।
प्रधानमन्त्री ज्यु, भारतमा ब्रिटिश शासन कायमै रहेको अवस्थाभन्दा अगाडिदेखि अरब सागरको किनारामा रहेको गोवा राज्यमा पोर्चुगलको आधिपत्य शासन व्यवस्था थियो । कसैसँग सन्धि-सम्झौता गरेर लिएको थिएन पोर्चुगलले । तर ईन्दिरा गान्धीले ४५९ वर्षपछि गोवा राज्यलाई भारतमा विलय गरिन् । त्यस्तै ब्रिटेनको अधिनमा रहेर मकाउ टापु ४५० बर्षपछि चाइनाले फिर्ता लियो । ब्रिटेनको अधिनमा रहेको हंककग टापु २०० वर्षपछि चाइनाले फिर्ता लिएको छ । संसारभरिका पुरानाभन्दा पुराना सन्धि-सम्झौताहरु युएनमार्फत् खारेज भएका छन् ।
त्यसैले मोदीजी, तपाई ख्याल गर्नुस् समयमै अर्काको नासो तुरुन्त फिर्ता गर्ने बानी गर्नुहोस् । यदि, तपाई फिर्ता दिन मान्नु हुन्न भने तपाईको देशमा रहेका गोर्खा रेजिमेन्टलाई नै हामीले गुहार्नु पर्छ । त्यतिबेला के हुन्छ ख्याल गर्नुस् ।
अझै पनि अहिले तपाईले फिर्ता गर्ने मनस्थिति नबनाए भोलिको पिढीले तपाईलाई धिक्कार्ने छ । अब हामी सबै जागी सकेका छौँ । हाम्रो सरकार पनि जागेको छ । हामी सब एक छौँ । हाम्रो भूमि त हामी फिर्ता ल्याएर छोड्छौँ छोड्छौं । १९५० को सन्धिले फिर्ता दिएको सम्पूर्ण भूभागबाट आफ्ना सैनिक अखडाहरु ब्यारेकहरु तुरुन्त खाली गरेर नेपाललाई सुपर्दगी गर्नुमा नै तपाईको भलाई हुनेछ । योभन्दा धेरै अब केहि भन्नुछैन । अब माफी मागेर हाम्रो भूमि फिर्ता गरिदिनुस् । सबै नेपाली खुशी हुनेछन् ।
एक जिम्मेवार नेपाली नागरिक